Semalt: Kungenzeka izinhlelo ezingafuneki Nendlela Yokuzigwema
Esikhathini salesi sihloko, uJulia Vashneva, uMphathi (Success we-8 (Semalt weMenenja yeMpumelelo yeMakhasimende, utshela ukuthi izinhlelo ezingadingeki zithinta kanjani ikhompyutha yakho nokuthi ungakugwema kanjani ukufaka i-PUPs. Kuyacaca egameni lokuthi izinhlelo ezingafuneki yizo izinhlelo, isofthiwe noma izinhlelo zokusebenza esifuna ukuzifaka kumakhompyutha ethu, amafoni, amaphilisi namanye amadivayisi. Zifaka efakwe kumasistimu wakho futhi zingalimaza amafayela akho kungakapheli amaminithi. Kunezindlela ezimbili i-crapware esakazeka kudivayisi yakho. Okokuqala, zihlanganiswa ngabathuthukisi bezinhlelo zokusebenza futhi zifakwe ohlelweni lwakho. Okwesibili, uwalayisha ngokungahambisani namawebhusayithi, bese abangela izinkinga. Izinhlelo ezingahle zifuneke zifakwe ohlelweni lwakho ngokwabo futhi ziba imininingwane yakho ngaphandle kolwazi lwakho.
Izinhlelo ezingahle zifuneke ezifakwe kudivayisi yakho ngendlela yama-toolbar neziphequluli kulula ukubona. Noma kunjalo, ezinye izinhlobo zezinhlelo azikwazi ukubonakala futhi zingalimaza i-Windows Taskbar Manager yakho kakhulu. Ngivumele lapha ngikutshele ukuthi ama-PUPs noma i-spyware noma i-malware. Iqukethe ama-dialer nama-keyloggers angathinta isistimu yakho. Ngakho-ke, kuhle ukufaka isofthiwe ye-antivirus ngokushesha ngangokunokwenzeka. Uma zivimbela ukufakwa kwakho, kufanele uqale kabusha ikhompyutha yakho noma ufake esinye isistimu yokusebenza. Izinhlelo ezingahle zifuneke zinganciphisa umsebenzi wedivaysi yakho futhi zingangcolisa ubumfihlo bakho.
Susa izinhlelo ezingafuneki
Ukuze ususe izinhlelo ezingahle zifuneke, kufanele uvule izilungiselelo zesiphequluli bese uya ezikhethweni zayo. Isinyathelo esilandelayo ukuphatha izengezo zakho, futhi lokho kungenziwa ngesisekelo Ngiphe mina lapha ngitshele ukuthi iziphequluli ezahlukene zinokukhethwa kukho okuhlukile. Uma ungaqondi ukuthi ungalungisa kanjani izilungiselelo, kungcono ukufuna usizo lochwepheshe. Okwamanje, kufanele ugweme ukusebenzisa izinhlelo zangaphandle njengohlelo lwe-.NET ne-Visual C ++ Yokusabalalisa. Kuyinto esemqoka ukususa lezo zinhlelo nazo zonke izinhlelo zokusebenza ezingadingekile kusuka kudivayisi yakho ngokushesha.
Vimbela ama-PUP kusuka kokufaka
Kuphoqelekile ukuvimbela izinhlelo ezingahle zifuneke ukufaka kukhompyutha yakho kanye nedivayisi yeselula. Ngenxa yalokhu, kufanele uhambe ku-Express Method ukhetho bese ufaka uhlelo lwe-antivirus ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kufanele ulande njalo i-freeware kusuka kumawebhusayithi aphephile futhi aqinisekile bese uya kokukhethwa kwenkambiso yangokwezifiso. Lapha akufanele uchofoze ngokucophelela inketho elandelayo. Okokuqala, kufanele ufunde amathiphu akho namasu okuba nomqondo walokho okunikezwayo. Uma inqubo yokufaka isiko isiphelile, isinyathelo esilandelayo ukufaka izinhlelo eziningana ze-antivirus ngokuphepha.
Inani elikhulu labaduni likhohlisa izisulu ngokusebenzisa izinketho zokwamukelwa nokwehla. Yingakho akufanele neze uchofoze kulawo mabhathini ngaphandle kolwazi lwakho. Sincoma kakhulu ukuthi ufunde imininingwane yesofthiwe nezici zomkhiqizo ngaphambi kokuchofoza inketho yokufaka.
Ekugcineni, singathanda ukusho ukuthi imikhiqizo yamahhala ayizinhle ngempela. Kodwa akufanele neze uzifake emithonjeni engaziwa noma engajwayelekile. Enye indlela esiyiqaphele ukuthi abanye abathuthukisi bezinhlelo zokusebenza nabasofthiwe baqala izinhlelo zabo ngezikhangisi zangaphandle zokuphanga. Sincoma ukuthi uhlale kude nemikhiqizo ukuze uqinisekise ukuphepha nokuphepha kwakho kwe-intanethi.